अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २७औं स्थापना दिवस मनायो – JANAMATPOST.COM :: NEWS FOR ALL
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २७औं स्थापना दिवस मनायो
२०७४, २७ माघ शनिबार १४:१९
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगको २७औं स्थापना दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । यस अवसरमा राष्ट्रव्यापी रुपमा कविता र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो भने आयोगमा कार्यरत १०१ जना कर्मचारीले रक्तदान गरेका थिए । यसका साथै आयोगले विभिन्न तहका कर्मचारीलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरेको छ । आज आयोगको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले कविता तथा वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा सान्त्वना स्थान प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो । साथै प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले अख्तियार सेवा पुरस्कार १६ जना र २५ जनाकर्मचारीलाई प्रशंसा-पत्र प्रदान गर्नुभयो । आयोगले ९ जना कर्मचारीलाई उत्कृष्ट अख्तियार सेवा पुरस्कारबाट सम्मान गरेको छ ।
यस अवसरमा रक्तदान गर्ने तथा पुरस्कार प्राप्त गर्ने सवै कर्मचारीलाई बधाई दिँदै प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले आयोगको स्थापना दिवसका अवसरमा सवै कर्मचारीलाई बधाइ दिँदै कर्तव्य निष्ठ भएर कामगर्न निर्देशन दिनुभयो ।
आयोगका सचिव राजन खनालले कुनै अपेक्षा नराखी गरिएको कामले सन्तुष्टी मिल्ने बताउदै पुरस्कारको अपेक्षा राख्ने कर्मचारीहरुले त्यही अनुरुप कार्य गर्नु पर्ने बताउनु भयो । सो कार्यक्रममा आयोगका आयुक्तहरु नवीनकुमार घिमिरे, डा.गणेशराज जोशी, राजनारायण पाठक र डा. सावित्री थापा गुरुङ्गको उपस्थिति रहेको थियो ।
यस अवसरमा आयोगले राष्ट्रव्यापी रुपमा कविता र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो । वक्तृतवकलामा हिमालय ह्वाइट हाउस उ.मा.वि. नयाँबानेश्वरका छात्र आदेश कार्की, महेन्द्र मा.वि. रेसुङ्गा, गुल्मीका छात्रा मनिषा पौडेल र नेशनल ओपन कलेज सानेपा ललितपुरका छात्र राम थापा क्षेत्री र कवितातर्फ मेगा नेशनल कलेज, कुमारीपाटी ललितपुरका छात्र निशान थापा मगर, बानेश्वर क्याम्पस, शान्तिनगरकी छात्रा काशिका अर्याल र एस्.भि.एकेडेमी, नयाँबानेश्वरकी छात्रा भवानीकुमारी खतिवडा क्रमशः प्रथम, द्धितिय र तृत्तीय भएका छन्।
दशजोड दुईदेखि स्नातकोत्तर तह सम्मका विद्यार्थीले भाग लिएको उक्त प्रतियोगितमा वक्तृत्वकलातर्फ सान्त्वना हुने गोल्डेनगेट उ.मा.वि.पुरानोबानेश्वरका छात्र अनिष पाण्डे र हेराल्ड ईन्टरनेशनल कलेज महाराजगंजका छात्र जीवनलाल भुसाल, कवितातर्फ सान्त्वना प्राप्त गर्ने जेभियर्स कलेज कालोपुलका छात्र निखिल पाण्डे र पुल्चोक क्याम्पस पुल्चोकका छात्र स्वस्तिक घिमिरे रहेका छन्। बक्तृत्वकलामा भाग लिन चाहने र कविता उपलव्ध गराउने विद्यार्थीको पहिलो चरणको छनोट पछि माघ २५ गते प्रस्तुती तथा वाचन गर्न लगाइ विज्ञहरुको समूहले छनोट गरेको थियो । दुई सत्रमा सम्पन्न सो प्रतियोगिताको पहिलो सत्रको अध्यक्षता आयोगका माननीय आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले गर्नुभएको थियो भने दोस्रो सत्रको अध्यक्षता आयोगका आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले गर्नुभएको थियो । यी दुवै विधामा प्रथम, द्धित्तीय र तृत्तीय हुने विद्यार्थीलाई २८ गते अयोजना हुने विशेष समारोहमा पुरस्कृत गरिने छ । साथै अख्तियार उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार पनि सोही दिन प्रदान गरिने छ ।